Samsung Galaxy Watch 2 dia hanana fampiasa tsara indrindra | Androidsis
Iray amin'ireo fanovozan-kevitra lehibe momba ny fividianana famantaranandro marani-tsaina ny Samsung. Na dia marina aza fa ny fisondrotana voalohany fa nanjavona ireo fitaovana ireo rehefa nahita ny fizakan-tenany kely ny mpampiasa, dia nijanona ho marin-toerana ihany ny orinasa eo amin'ny tsenan'ny entina. Ary ankalazaina io Samsung Galaxy Watch Iray amin'ireo firavany lehibe io.
Ho fanampin'izay, rehefa nivoatra niresaka teknolojia isika, ireo mpanamboatra smartwatch lehibe dia nahita ny vahaolana amin'ny olan'ny bateria lehibe izay nijalian'ireo fitaovana ireo. Amin'izany fomba izany dia mora be izao ny mahita famantaranandro marani-tsaina maharitra herinandro mahery.
Eny, ny Samsung Galaxy Watch 2 dia hanana baoritra mihodina
Araka ny efa nolazainay taminareo, ny Samsung Galaxy Watch dia iray amin'ireo voahangy goavan'ny mpanamboatra. Mandra-pikatsoany tao amin'ny fianakaviana Active vaovao. Famantaranandro marani-tsaina feno tanteraka, saingy tsy misy iray amin'ireo singa mampiavaka an'i Samsung indrindra: ny mampino bezel mihodina.
Ary izany dia, amin'ny alàlan'ity singa ity dia afaka mivezivezy amin'ny alàlan'ny interface amin'ny fitaovana isika, miditra amin'ny lahasa sasany ary afaka manokatra rindranasa nefa tsy mikasika ny efijery, manalavitra ireo soritra manelingelina voamarika eo amin'ny vera. Saingy nesorin'i Samsung tamin'ny laharam-pahavitrihana io fampiasa io. Na dia mitondra vaovao tsara aza izahay: ny Samsung Galaxy Watch 2 dia haka ity entana ity.
Araka ny efa fantatsika, ny Samsung Galaxy Watch 2 dia nandalo ny fanamarinana FCC, izay ahitantsika fa ho avy izy io miaraka maodely 45 mm. Ary ny iray amin'ireo zavatra tsy ampoizina lehibe dia ny fampiasana «bezel mihodina». Toa narahin'ny mpanamboatra ihany ny fangatahan'ny mpampiasa, izay nangataka ny famerenana an'io singa mahasoa io.
Etsy ankilany, fantatray fa hisy ny kinova an'ny Samsung Galaxy Watch 2 vita amin'ny titanium hiantohana ny fanoherana avo amin'ny karazana kapoka rehetra. Ny daty famoahana azy? Amin'izao fotoana izao dia mistery tanteraka izy io, fa ny zavatra lojika indrindra dia ny fieritreretana fa hatolotr'izy ireo miaraka amin'ilay andrasana Samsung Galaxy Note 20 mandritra ny volana aogositra manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Samsung Galaxy Watch 3 dia hamerina ny fiasa tena irina indrindra
Azonao atao ny mampihetsika ny maody amin'ny birao toy ny Samsung DeX ao amin'ny Taskbar miaraka amin'ny kinova 6.0